स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन - Karobar National Economic Daily
स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन
query_builderJune 23, 2017 11:07 AM supervisor_accountरमेश ढकाल visibility1282
स्थानीय तह गठनपश्चात् राज्य जनताको पहुँचमा पुगेको स्थिति छ । नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन राज्य प्रणालीले ल्याउने आशामा सबै ढुक्क पनि छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा भाग लिने अवसर प्रदान गरेको छ ।
स्थानीय तहमा ठूलो मात्राको बजेट सोभैm जाने प्रणालीको सुरुवात भएको छ । बजेटको नयाँ परिपाटीले तल्लो तहका जनताको आर्थिक जीवनमा पनि परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा बजेटले लिएको छ । राज्यको समग्र विकासमा स्थानीय तहको महŒवपूर्ण जिम्मेवारी रहने तथ्य सन्देहरहित छ ।
राजनीतिक पद्धति र संविधानको मान्यताभित्र रहेर स्थानीय तहले राष्ट्र निर्माणको कार्यलाई गतिशील तुल्याउनु अपरिहार्य हुन गएको छ । संविधान र अन्य कानुनको अधीनमा रही गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा स्थानीय तहको हुने व्यवस्था छ । यो नै सबैभन्दा महŒवपूर्ण विषय हो, जुन अनुशासनसँग सम्बन्धित छ ।
स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा राष्ट्रिय आर्थिक नीतिसँग प्रतिकूल नहुने गरी वस्तु तथा सेवाको ओसारपसार, पुँजी तथा श्रमबजार, छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी कानुन बनाई कर लगाउने, प्राप्त रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने एवं राजस्व र व्ययको अनुमान गरी खर्च गर्ने स्वायत्त अधिकार स्थानीय तहमा रहेको संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको छ ।
यसबाट स्थानीय तहमा सुशासन एवं आर्थिक अनुशासनको मान्यता स्थापित गर्नका लागि जनप्रतिनिधिको तह नै बढी जिम्मेवारी रहेको छ । बजेटको बाँडफाँड, परिचालन एवं उपलब्धिमा स्थानीय तहबाट हुने पारदर्शिता र जवाफदेही महŒवपूर्ण विषय हो । आर्थिक क्रियाकलापलाई कुनै दलविशेषप्रति नभएर जनताप्रति समर्पित गरी जनअपेक्षाअनुरूप विकासका कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय तहको आर्थिक प्रशासन वा समग्र प्रशासनमा आर्थिक अनुशासन कायम राख्न कुनै नियम–कानुन तर्जुमा मात्र गरेर पुग्दैन, उचित कार्यान्वयन उत्तिकै जरुरी हुन्छ । त्यसैले कार्यान्वयन तहमा रहने जनप्रतिनिधिले आर्थिक अनुशासनतर्पm गम्भीर हुनु आजको माग हो ।
वर्तमान बजेट विनियोजनअनुसार बजेटको उच्चतम परिचालनबाट नागरिकका मागहरू सम्बोधन गर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन पुगेको छ । अब ठूलो मात्राको बजेट गाउँ–गाउँ पुग्ने अवस्थाले स्थानीय तहको विकासमा नयाँ फड्को मार्ने आशा जनताले लिएका छन् ।
विकास र आवश्यकता एकआपसका परिपूरक हुन् । विकासलाई नागरिककेन्द्रित गर्न निर्वाचित प्रतिनिधिको भूमिका अहम् हुन्छ । स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने आय तथा कोषबाट गर्ने खर्चको उपलब्धिलाई असल अनुशासनमा बाँध्नु पनि आवश्यक छ । खर्च गर्दा कानुनी पाटाका व्यवस्थाहरू अवलम्बन नगर्ने, योजना छनौट तथा सोमा गरिने खर्च र उपलब्धि बेइमानपूर्ण अवस्थामा रहने, कार्यक्रम एवं कार्यान्वयनका आधारमा रही स्रोत तथा साधनको परिचालनमा परिपक्व नदेखिने, आय तथा व्ययका समग्र नतिजाउपर अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका सीमाहरूलाई जनमैत्री नबनाएको स्थितिले विगतमा आर्थिक अनुशासनले निश्चित गन्तव्य तय गर्न नसकेको हो ।
अब स्थानीय तहले समग्र रूपमा आवश्यकतालाई सहजीकरण तथा सरलीकरण गरेर सेवा प्रवाहलाई मूर्त रूप दिनु आवश्यक छ । स्थानीय तहले आर्थिक अनुशासनलाई उच्च बिन्दुमा राख्न पारदर्शी नेतृत्व, योजनाको असल अनुगमन, खर्चको प्रामाणिकता, सार्वजनिक लेखापरीक्षणको प्रभावकारितामा जोड दिनुपर्छ । त्यस्तै, वित्तीय उत्तरदायित्व एवं वित्तीय जवाफदेहिताका आर्थिक गुणलाई मूलमन्त्रका रूपमा लिई अनुशासनलाई मार्गप्रशस्त गर्नु पनि आवश्यक छ ।
वर्तमान राज्यको स्वरूपअनुसार अबको गन्तव्य जनतामैत्री विकास क्रियाकलापलाई गतिशील बनाई समग्र राष्ट्रलाई समृद्धिमा अगाडि बनाउनु हो । राज्यको विकासमा स्थानीय तहको प्रारूप प्रमुख आधारशीलाको रूपमा रहेको कुरा संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ । विकासको आधारशीलाको प्रमुख माग जुन जनतासँग जोडिएको हुन्छ, त्यसले कारोबारको आर्थिक अनुशासनलाई परिलक्षित गर्छ । जापान, नर्वे, मलेसिया तथा सिङ्गापुर लोकतन्त्र अपनाई आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने विकसित मुलुकहरू हुन् ।
विकासको आधारशिलामा आर्थिक अनुशासन महŒवपूर्ण औजार रहेको र अनुशासनका गुणलाई सर्वोपरि मानी जनताकेन्द्रित विकास अवधारणा अपनाएकाले यी मुलुकहरूले छोटो समयमा नै राज्यलाई कायापलट गर्न सकेका हुन् । विगत १० वर्षअगाडि जातीय द्वन्द्वमा पिल्सिएको मुलुक रुवान्डाले स्थानीय तहको विकासमा ध्यान केन्द्रित गरेकाले छोटो अवधिमै तीव्र विकास गरी जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकेको छ ।
निर्वाचित प्रतिनिधि नै अबको स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन कायम राख्न र कार्यलाई उपलब्धिमूलक बनाउने भूमिकामा महŒवपूर्ण स्थान राख्ने जनशक्तिका रूपमा रहने देखिएको छ । आत्मकेन्द्रित अवधारणा नलिई आफ्नो प्रतिष्ठालाई कायम राखी कामप्रतिको आत्मबोध प्रतिनिधिले कायम गर्न सकेमा केही वर्षमा विकसित मुलुकको दाँजोमा हामी पनि पुग्ने अपेक्षा लिन सक्छौं । यसका लागि आर्थिक अनुशासनको पाटोमा प्रतिनिधि र संलग्न कर्मचारीको लगावलाई केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ ।
विगतमा देखा परेका चुनौतीहरूलाई समन्वय गरी अगाडि बढाउन प्रतिबद्धताको भने कमी रह्यो । हामीले यसतर्पm विचार र मन्थन भने गर्नैपर्ने हुन्छ । निम्नलिखित प्रश्नहरूमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिई विगतको पाठलाई सुधारको मार्गमा अगाडि बढाउन केन्द्रित पनि गर्नुपर्छ ।
हाम्रो शासन व्यवस्थामा विगतदेखि विकासका क्रियाकलापमा संलग्न सबै पक्षको स्थितिमा के आर्थिक अनुशासन कायम थियो ? उपलब्धिमा के आर्थिक अनुशासनले प्रमुखता पाएको थियो ? के हामी पारदर्शी र अनुशासित मुलुक हौं ? के हामीले सम्पादन गरेका क्रियाकलापमा आर्थिक अनुशासनले निश्चित मार्ग तय गर्न सकेको थियो ? यी सबै प्रश्नको जवाफ दिँदा सजिलै हामी अनुत्तीर्ण छांै ।
त्यसैले अबको हाम्रो गन्तव्य बजेटको परिचालन, खर्चको उपादेयता र उपलब्धिलाई उत्तरदायित्व बहन गरी वित्तीय जवाफदेहिता पूरा गर्नु हो । यी सबै समग्र रूपलाई आर्थिक अनुशासनको घेरामा लिन सक्छौं । त्यसैले अबको जनताको प्रमुख माग पनि आर्थिक पारदर्शिता कायम राखी राज्यलाई समृद्धशाली बनाउनु हो । यसको मूर्त रूप कार्यान्वयन गर्न गठित स्थानीय तह एउटा कोसेढुङ्गाका रूपमा स्थापित हुन पुगेको छ ।
जनताका आवाज नसुन्ने, मागमा आधारित योजना तथा कार्यक्रमलाई मैत्रीपूर्ण बाटोमा दिशाबोध नगर्ने, तजबिजी निर्णय गर्ने, निर्णयलाई पारदर्शी नबनाउने, आम्दानी तथा खर्चमा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगर्ने आदि समस्या हामीले विगतमा भोग्यौं ।
कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेकोमा पनि रीत नपु¥याउने, स्रोतसाधनको मूलमा नै बेइमानपूर्ण व्यवहार अपनाउने, सल्लाह तथा सुझावलाई विवेकशील आधारमा ध्यान केन्द्रित नगर्ने, सम्पादन गरेका सूचकलाई नागरिकमाथि छलफल नगर्ने, अनुगमनलाई ध्यान नदिने जस्ता विगतका चुनौतीलाई सामना गरी स्थानीय तहले अनुशासित कार्ययोजनालाई अगाडि बढाएन भने अब आउने स्थिति पनि जहाँको तहीं रहने अनुमान गर्न सकिन्छ । विकासको गतिविधि हुन नसक्नुमा विगतमा राजनीतिक प्रणालीलाई दोष दिएको हाम्रो सामु छ ।
वि.सं. २००७ देखि ०६२÷६३ सम्म लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि विभिन्न संघर्ष गर्दै आएको अवस्था पनि हामी सामु छर्लङ्ग छ । शासन व्यवस्थाअनुरूपको राजनीतिक परिवर्तन र मूल कानुनमा आमुल रूपले परिवर्तन आएको छ । अबको गन्तव्य आर्थिक विकास र आर्थिक अनुशासन हो । कमजोरीपनामा आमूल सुधार गरी पूर्वाधार विकासलाई तत्काल ध्यान नदिने हो भने हामी सधैं पछाडि धकेलिन सक्छौं ।
आर्थिक अनुशासनको परिचायकता मूलतः कुशल स्थानीय नेतृत्व नै हो । उद्यमशील क्षमता, सोचनीय एवं छनौट क्षमता र कार्यप्रतिको अभिप्रेरणा नेतृत्वमा रह्यो भने आर्थिक क्रियाकलापले पारदर्शिताको बाटो चयन गर्न सक्छ ।
यसो भएमा स्थानीय तहको हरेक व्यवस्थापकीय क्रियाकलापमा आमूल रूपमा सुधार हुन गई राज्यले लिएको आर्थिक उद्देश्य तथा दीर्घकालीन नीतिहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सघाउ पुग्न सक्छ । यसका लागि आर्थिक बोध, सहयोगी भावना, कार्यको गाम्भीर्य, कार्यमूल्याङ्कन र आत्मनियन्त्रणप्रति सजग रहनुपर्छ । यसो भएमात्र स्थानीय तह बलियो भई आर्थिक अनुशासनलाई बढावा दिन सकिन्छ ।
स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणालीलाई जनचाहना अनुरूप सञ्चालन गर्न वित्तीय उत्तरदायित्व, आर्थिक अनुशासन र प्रणालीगत सुधार महŒवपूर्ण विषय हो । प्रत्येक पटक सरकार गठन हुँदा पनि आर्थिक अनुशासनलाई विशेष महŒव दिएकै हो ।
विगत वर्षदेखिका नीति तथा कार्यक्रमहरूबाट पनि आर्थिक अनुशासनसम्बन्धी सरकारी वचनबद्धता स्पष्ट दर्सिन्छ, तर यसको कार्यान्वयन पक्ष भने खासै प्रभावकारी भएको पाइँदैन । स्थानीय तहको प्रशासनलाई सुदृढ गरी अनियमित कार्यको नियन्त्रण गर्नु जरुरी हुन्छ । यसका लागि आर्थिक अनुशासन कायम नगर्नेउपर कडा कारबाही गर्ने, प्रशासनिक झन्झटबाट जनतालाई मुक्त तुल्याइनुपर्ने, स्वविवेकीय कार्यपद्धितलाई न्यून गरी स्थानीय प्रशासनलाई पद्धतिमा आधारित गराउने काम गर्नुपर्छ ।
कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, कार्यप्रगतिलाई नतिजासँग तुलना गरी व्यवस्थापन गरिनुपर्ने जस्ता सुधारात्मक उपायहरू अवलम्बन गरिनु जरुरी हुन्छ । सोबाट आर्थिक अनुशासन कायम हुन गई राज्यले लिएको आर्थिक नीति तथा उद्देश्य पूरा हुने दिशालाई निश्चित गर्न सकिन्छ ।